5-Sekaiichi CNC machine Centers
Mould / Pattern Processing Center
3D Mbeu dzakauchikwa machine Centers
Rinogadzwa Since 1998
CHENcan® ndeimwe vaitungamirira guru zvinowanika CNC mhinduro rubatsiro mu China, ichipa dzinza 5-Sekaiichi CNC machine Centers, CNC Mills, CNC Routers, uye 3D Printers zvizere. Kwemakore anopfuura 22., takatsaurira pakupa mumwe chemhando Quality-Kuedza-Ratio CNC machine negadziriso yedu vatengi. With kumativi 200 nyanzvi unyanzvi, 18.000 ㎡ okuwana Zvivako, uye ISO 9001 vanopupurirwa yepamusoro Kutarisira mugadziriro, tinopa yepamusoro CNC machine mhinduro pa inokwanisika mitengo.
5-Sekaiichi CNC machine Centre - Gantry Movi ...
5-Sekaiichi CNC machine Centre - Table Movin ...
Large CNC Mill nokuda Processing Aluminum Patterns
Large CNC Mill nokuda Processing Wooden Patterns
Marketing dhipatimendi: Anokonzera pakuumba vangangozova vatengi. Welcome kutaura nesu kana uchifarira 5 akabatana cnc centre, cnc router, chakuvhuvhu cnc centre, RV ematongerwo ukomba muitiro centre, yeplasma nokuveza muchina uye internet Laser okurwadzisa michina. Isu ichapa zvakanakisisa mhinduro.
Mukati 7day kubvira menyu tsika Clearance: kana cnc router wacho chero zvikamu ane matambudziko, ticharamba kuzvishandura mahara. Pfuura 7 days kubva menyu tsika Clearance asi mukati 12 mwedzi garandi nguva: kana paine dambudziko pamwe cnc
Tine mhando unyanzvi Professional R & D chikwata, vanopfuura 20 injiniya, vaigona kugadzira uye kubereka 5 akabatana cnc machine, RV ematongerwo ukomba kubudiswa centre, hombe muforoma cnc centre nezvimwe mukuru-mugumo tsika cnc michina.
Vaivimbwa Pakati Industry Leaders
Professional R & D chikwata: pachake mhando nyanzvi mainjiniya, vaigona kugadzira uye kubereka 5 akabatana cnc machine, RV ematongerwo ukomba kubudiswa centre, hombe muforoma cnc centre nezvimwe mukuru-mugumo tsika michina ...